Oziọma taa nke January 16, 2021 na nkọwa nke Pope Francis | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Oziọma taa nke January 16, 2021 na nkọwa nke Pope Francis
Mụnna m, okwu Chineke dị ndụ ma dị nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla; ọ na-abanye ruo n'ókè nkewa nke mkpụrụ obi na mmụọ, ruo na nkwonkwo na ụmị, ma chọpụta mmetụta na echiche nke obi. Onweghi ihe ekere eke puru izopu Chineke, mana ihe nile gba ọtọ ma ekpuchighi ya n’anya onye ahu anyi aghaghi iza azu.
Ya mere ebe ayi nwere Onye-isi-nchu-àjà di uku, Onye gabigara ihe nile di n’elu-igwe, bú Jisus Ọkpara Chineke, ka ayi me ka okwukwe-ayi sie ike. N’ezie, anyị enweghị nnukwu onye nchụaja nke n’amaghị ka esi sonye na adịghị ike anyị: a nwalere ya onwe ya n’ihe niile dịka anyị, ewezuga mmehie.
Ya mere ka ayi were nkwuwa-okwu biarue oche-eze amara, ka ayi we nata obi-ebere, hu kwa amara, ka ewe nyere ayi aka n'oge kwesiri.
Mkp 2,13: 17-XNUMX
N'oge ahụ, Jizọs pụrụ ọzọ n'oké osimiri; ìgwè mmadụ ahụ niile bịakwutere ya, o wee kụziere ha ihe. Ka ọ na-agafe, ọ hụrụ Livaị, nwa Alphaeus, ka ọ nọ ọdụ n'ụlọ ọrụ ụtụ, wee sị ya: "Soro m." O we bilie, so ya.
Mgbe ọ nọ na-eri nri n'ụlọ ya, ọtụtụ ndị ọnaụtụ na ndị mmehie sooro Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya nọdụ na tebụl; n'ezie e nwere ọtụtụ ndị soro ya. Ya mere ndi-ode-akwukwọ nke ndi-Farisi, mb seeinge ha huru Ya ka Ya na ndi-nmehie na ndi-ọna-utu ahu n eatri ihe, ha we si ndi n disciplesso uzọ-Ya, Gini mere Ya na ndi-ọna-utu na ndi-nmehie n andri ihe?
Mgbe Jizọs nụrụ ihe a, ọ gwara ha, sị: «Ọ bụghị ahụ ike chọrọ dọkịta, kama ọ bụ ndị ọrịa; Abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume, kama ọ bụ ndị mmehie ».
E menyekwara ndị dọkịta Iwu ahụ ihere. Ha kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya ma jụọ ya, sị: “Ma olee otú Onye Ozizi unu si mee ndị a, ya na ndị a? Ma, bụrụ onye na-adịghị ọcha! ”: Iri ihe na-adịghị ọcha na-eme ka ị ghara ịdị ọcha, ị dịghị ọcha. Jisus we weta ala, si okwu nke-atọ a: Ganu muta ihe ebere nkem chọrọ, ọ bughi àjà, putara. Obi ebere Chineke na-achọ onye ọ bụla, na-agbaghara onye ọ bụla. Naanị, ọ na-arịọ gị ka ị kwuo: "Ee, nyere m aka". Naanị nke ahụ. (Santa Marta, 21 Septemba 2018)